BBC Caddeymo aan aad looga hadlin oo muujinaya awoodda Al Shabaab ee Muqdisho | Biyoguurenews.com
Home Wararka BBC Caddeymo aan aad looga hadlin oo muujinaya awoodda Al Shabaab...
BBC Caddeymo aan aad looga hadlin oo muujinaya awoodda Al Shabaab ee Muqdisho
Waxaan warbixintan ku eegeynaa dhowr arrimood oo xarakada Al Shabaab ay go’aanno ka soo saartay, kuwaas oo haatan u muuqda inay dhaqan galeen iyo sida dadka qaar ay u aaminsan yihiin nidaamka garsoor ee Al Shabaab, marka loo eego kan dowladda.
Amarkii Al Shabaab ay ku mamnuucday kaamerooyinka CCTV-ga
Kaamerada qarsoon ayaa dad badan oo reer Muqdisho ah waxay ku rakibaan goobahooda ganacsi, si ay ula socdaan dhaq-dhaqaaqyada aaga ganacsigooda sida hoteellada, dukaamada iyo guryaha la degan yahay, iyagoo aaminsan inay yareyn karto khatar walba oo amni iyo inay sahli karto dabagalka, waa haddii ay wax amnigooda lid ku ah.
Qaar ka mid ah ganacsatada oo ay BBC-da la hadashay ayaa sheegay in kaamerooyinka ay ku rakiban jireen gudaha iyo afaafka hore ee xarumaha ganacsiga, hasa yeeshee, arrintaas ay haatan meesha ka baxday, ka dib marii Al Shabaab ay amar ku bixisay in kuwa bannaanka ku dheggan la bixiyo.
“Anigu waxaan dukaan ka furtay waddada Maka Al Mukaram, waxaan isku dayay in aan Kaamero ku xiro dukankeyga, balse ganacsatadii iga horreesay ee halkaas sii deganayd ayaa ii sheegay in Al Shabaab ay ku amreen in aanan wax Kaamera ah lagu xirin afaafka hore ee dukaamada, marka anigu sidaas ayaan isaga daayay”, sidaas waxaa BBC-da u sheegay mid ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho.
Waxaa intaas dheer in Kaamerooyin ay dowladda Soomaaliya ku rakibtay hareeraha waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho la damiyay, kuwaas oo aan haatan shaqayneyn.
“Kamerooyinka CCTV-ga ee Magaalada ka shaqaynayay dhammaadkii sanadkii 2016, waxay gaarayeen 42 xabbo oo ku xirnaa isgoysyada muhiimka ah ee magaalada, waxaana xarunta laga maamulo ay ahayd Xarunta Taliska ciidanka booliska. Alshabab lacag badan ayay ku bixiyeen arrintaas in la saaro, sida muuqatana waa ay ku guulaysteen, wixii ka dambeeyay Nofemabar 2018, gebi ahaanba howlgab ayay noqdeen Kaamerooyinka CCTV-ga oo idil, ilaa haddana, cid wax ka qabatay ma jirto”, sidaas waxaa BBC-da u sheegay Cabdalla Cabdalla oo horay usoo noqday taliye ku xigeenkii hay’adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA.
Waxaa kale oo uu sheegay in Kaamerooyinkas ay horay u duubeen gaadiid lagu soo rakibay qaraxyo, kuwaas oo ku qarxay waddada Maka Al-Mukara, waxaana taasi ay sahashay in booliiska ay tixraacaan muuqaalkaas, ayna ku guuleysteen in gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyay.
“Waxay Alshabab ku ahayd CCTV caqabad weyn oo dhaawac gaarsiiyay howlgalladooda, waxaana jiray kiisas laga dabatagay, sababna ay u ahayd caddeymo laga helay CCTV-ga, sababta loo damiyay waa in aan wax raad ah ka harin ama aan la ogaanin xogaha ku saabsan howlgalka Al Shabaab ay ka fuliyaan magaalada dhexeeeda,” ayuu raaciyay Cabdalla.
Tan iyo markii ay burburty dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxa meesha ka baxay nidaamkii dowladeed oo ay ka mid yihiin garsoorka, taa oo keentay in la kala dhaco hanti badan.
Dad badan oo ku nool goobaha dowladda ay maamusho ayaa miciin biday nidaamka garsoor ee Al Shabaab, kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah sheegay in dhul, guryo ama hanti kale oo ay lahaayeen si xoog ah looga hestay.
Dadkan ayaa inta badan ku andacooda in hay’adaha garsoorka ee dowladda ay yihiin kuwo aysan ka marnayn musuqmaasuq iyo caddaalad darro, taasina ay ku kaliftay in maxkamadaha Al Shabaab ee shabeelooyinka, gaar ahaan deegaannada Tooro-Toorow iyo Bariirre ay caddaalad u raadsadaan.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya, Baashe Maxamuud ayaa horay u sheegay in dadka Al Shabaab u raadsada caddaaladda ay yihiin kuwa dacwadaha lagaga guuleysto.
“Midda ugu daran oo laga yaqyaqsooda ayaa ah in shacabkii aan mas’uuliyiinta u ahayn ay u xukun tagayaan Al-Shabaab, iyagoo ugu tagaya Bariiire, ama gobolada dhexe oo ay leeyihiin ruuxa jooga Xamar Weyne imow meel-heblaayo oo xukunkiisa lagu qaadayo, taas waxaa sababay in aysan jirin wax la dhaho caddaalad”, sidaas waxaa golaha shacabka horay uga sheegay xildhibaan Maxamed Xuseen Afaraale, oo ka tirsan baarlamanka Federaalka Soomaaliya.
Canshuurta ay Al-Shabaab ka qaado ganacsatada ku sugan goobaha dowladda ay maamusho
Marka laga hadlo canshuur bixin, waa mid ku kooban dowlad loo igmaday bixinta adeegyada dadweynaha, balse qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ayaa canshuur siiya xarakada Al Shabaab, si ay uga nabad galaan.
Ganacsato badan ayaa arrinkan ku qaba culays oo waxay si isku mid ah canshuur u siiyaan Al Shabaab iyo dowladda hoose ee Xamar.
“Waxaan doonayaa in aan dukaan ka furto meel ka mid ah Muqdisho, haddii aan bixin waayo canshuurta Al Shabaab, waa la idilayaa, marka waan ku qasabanahay in aan Al Shabaabna canshuur siiyo”, ayuu raaciyay ganacsadahan ku nool magaalada Muqdisho.
Arrinkan ayaa waxaa si weyn ganacsatada ugu canaanta mas’uuliyiinta dowladda oo ku baraarujiya in Al-Shabaab ay u diidaan canshuurta, tallaabadaas oo halis ku keeni karta nafsadda iyo hantida ganacsatada.
“Marka aad dukaan furaneyso waa in aad kusii xisaabtantaa lacagta canshuurta, waa lagu soo wacayaa, haddii aad diidana waa lagu dilayaa”, ayuu raaciyay ganacsadahan oo magacaiisa ka gaabsaday.
Dadka wax ka qora arrimaha Soomaaliya ayaa aaminsan in arrimahan oo dhan ay ugu wacan tahay in dowladda aysan kasban shacabka.
“Al Shabaab waxay ku dhex dhuumaaleysanayaan oo ajendahooda ka dhex fuliyaan magaalooyinka ay maamusho dowladda, sida Muqdisho iyo maamul goboleedyada, oo ay xoogga saaraan inay cadaadiyaan ganacsatada Soomaaliyeed, iyagoo adeegsanaya cabsigelin, shacabka iyo dowladda oo aan wada shaqeneyn ayaa u baahan in daraasaad lagu sameeyo”, sidaa waxaa ku doodaya Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha ammaanka.
Dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada ayuu sheegay in loo baahan yahay in kaalintooda ay ka soo baxaan, dagaalkana lagu kala adkaado.
BBC-da ayaa isku dayday in arrimahan ay wax ka weydiiso mas’uuliyiinta laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya, balse nooma aysan suurtagelin.
Walow ururka Al Shabaab uu caddaadis milatari kala kulmaya duqeymaha cirka ee diyaaradaha Mareykanka iyo weerarrada qorsheysan, ayaa haddana wali waxaa muuqata in fari aysan ka qodnayn dagaalka Al Shabaab, mar haddii ganacsatadii ku sugnaa goobihii gacan ku heyntooda lagu ogaa dowladda ay canshuur ka qaadayaan.
Previous articleMilatariga Suudaan “Waa Qasab In Dalka Lagu Xukumo Shareecada Islaamka
Next articleBerbera, maareeyaha dekadaha somaliland oo ka hadlay tadawarka dekadu samaysay iyo markabkii ugu waynaa oo abid kusoo xidha dekada